Chii chinonzi mindset mindset chinoreva - sei kukudziridza kuongorora mafungiro?
Psychology and Relationships Ziva iwe pachako
Mafungiro ekuongorora - maitiro ekufambisa kwekufunga mafungiro
Munhu mumwe nomumwe ane zvipo uye akasiyana. Kufungisisa pfungwa ndeimwe yeunhu husingaoneki, iyo, iyo, iyo inogona kubudirira mune zvakawanda zvoupenyu. Kugona kuongorora nekufungidzira kunokosha mune sayenzi, mishonga, criminalistics, psychology.
Chii chinonzi analyset mindset chinorevei?
Tarenda anotanga kuzviratidza ivo kubva paudiki, vabereki vakachenjera vanocherechedza simba remwana wavo vakagadzirirwa kutanga kuvakukura. Ndezvipi zvikonzero zvinoita kuti munhu afunge kuongorora? Imwe mhinduro ndeyokutungamira kana kutonga kwemaodzanyemba kwenzvimbo yehuropi inobata mano ekufunga, manzwiro uye kupararira kwepfungwa pamusoro penzwi. Mafungiro ekuongorora mafungiro inzira yekufunga inosanganisira
kunyatsoongorora tsanangudzo, zviitiko, zviitiko;
kukwanisa kuvaka zviketani zvine musoro;
kukwanisa kuparadzanisa chikuru kubva kune wechipiri mune ruzivo rwakakura ruzivo;
mashoko akajeka emifungo;
Analytical thinking in psychology
Kufungidzira kwepfungwa mune zvepfungwa ndeyeimba ye psyche uye kuratidzira hukama huripo hwemunhu ane chinangwa chakakomba chinangwa. Kufunga kwakanyanyisa kana kufungidzira ichinyorwa chekusaziva-kufunga kwakanaka, kunobva pakuziva kwakadzika, kwakaitika munguva uye kunoratidzwa nezvikamu:
"Kuongorora" kana kunzwisisa kwechiitiko, mamiriro ezvinhu, dambudziko. Chinhu chinonyanya kukosha pazera iri ndechekukurudzira kwevanhu mukuedza kugadzirisa mamiriro acho ezvinhu.
Ona zvisarudzo, shandisa mashoko uye ita mabasa. Zvose zvinogadziriswa zvinogadziriswa zvekugadzirisa zvinowanikwa.
Nzira dzokugadzirisa mamiriro ezvinhu akaoma: kushandisa shanduro dzekare dzakazivikanwa kana kugadzira mhinduro itsva.
Purogiramu muChiito (Basa Rinobatsira).
Kana dambudziko racho risina kunyatsogadziriswa, nguva yemasvingo uye kutsvaga mitsva itsva.
Analytical nekutsoropodza kufunga
Analytical thinking inogona kubhadharwa (kwete nguva dzose) nehutano hwakadai sekutsoropodza. Kufunga kwakakosha kunobatsira muongorori kuti aone zvakananga pfungwa, zvisarudzo, ona kushaya simba uye chengorora mafungiro uye chokwadi. Nokufungisisa kwakanyanyisa kufungidzira, pane kuisa pfungwa pane kukanganisa kwevanhu, kutonga, zvisarudzo, izvo zvinodzivisa kunyatsoongorora, kushandisa uye kugamuchira zvibereko zvakanaka.
Kuongorora nekufungisisa kufunga
Mafungiro ekuongorora anonyatsopindirana nekufunga kwakanaka uye anovimba naro mukuvakwa kwemaketani anonzwisisika nekubatana. Masayendisiti anofunga nezvekufungisisa pfungwa yekuenzanisa nemafungiro ekusaziva-kufunga kwakanaka. Chero kushanda kwekufunga inzira yakaoma uye yakaoma inosanganisira zvose nzira dzomukati uye kunze kwezvinhu. Mafungiro ekuongorora pamwe chete neanofungwa, anobatsira munhu:
simbisai nguva dzose;
tarisira (kuverenga) kukura kwezviitiko, zvese;
kuvaka iyo inofungidzirwa kuwirirana pakati pezvinhu nezvinhu kunze kwekuti uidzidze panguva imwe chete;
chinonyanya kusimbisa mhedziso nekubatsira kwekutaura kwakanyorwa kana kutaura.
Nzira yekukudziridza pfungwa yekuongorora sei?
Iyo pfungwa yekuongorora, yakafanana nechimwe chimiro chepanyama kana tarenda yemunhu, haifaniri kugara pane imwe "pfungwa" - zvakakosha kukura izvo zvinopiwa kubva pakuberekwa. Izwi rakakurumbira richiti: "Kubudirira kuri 1 muzana yetarenda uye 99 muzana yebasa" rinoshandiswawo pakuvandudzwa kweunyanzvi hwokuongorora. Apo munhu paanoisa chinangwa che "kuputa" kuongorora kufunga, mutemo unokosha unowedzera. Pakutanga danho iri:
mhinduro ye crossword puzzles, scanwords;
kuverenga mutsveki nyaya nenyaya dzezviito, zvinokurudzira, zvinangwa zvemasimba;
checkers kana chess - nzira yakanaka yekuvandudza kuongorora.
Kudzidzira kuongorora mafungiro
Kuongorora maitiro kunotanga kukura kubva paucheche. Kune mwana ane "mathematical" mindset, zvichabatsira kuva nekubatana pamwe chete nevabereki mukugadzirisa puzzles, kupandukira, mabasa nekuwana kusiyana kwemifananidzo, kutsvaga zvinhu zvisipo. Nzira yekukudziridza kuongorora mafungiro kune munhu mukuru, kana mamiriro ezvinhu akasiyana-siyana, kana kukwanisa kuongorora kwakakosha zvikuru (kukurudzirwa, chido chekuziva izvo zvinogona)? Kuvandudza ruzivo rworuboshwe uye ruzivo rwekuongorora zvinogona kuitwa chero ipi zvayo, kuita zvidzidzo:
Kuongorora kwehupi hupi ruzivo runobva kunze: zvematongerwo enyika, zvehupfumi. Ndezvipi nharo dzezvematongerwe enyika, vezvematongerwo enyika, izvo zvinomutsa kusava nechokwadi, sezvinoitika munyaya iyi munhu iyeye pachake angadai akaita.
Zuva rimwe nerimwe, kuuya nemamiriro akasiyana-siyana nezviitiko zvisingafanoonekwi (sangano rebhizimisi, kuenda kune imwe nzvimbo, kutaura kwevoruzhinji ) uye funga pamusoro pemikana yakawanda, iyo ndiyo yakanakisisa uye nei.
Kugadzirisa zvinetso zvinonzwisisika.
Iva nechinangwa uye uite izvi uchishandisa shanduro yegoridhe:
kuunganidzwa kwemashoko akakwana;
definition of primary links;
zvinyorwa zvekugadzirisa uye kubudirira, chirevo chekufungidzira;
kubudirira kwechinangwa: chiito chinoenderana nezvisarudzo zvakatorwa.
Analytical mentality - basa
Iyo pfungwa yekuongorora ndiyo pfungwa yakarongeka. Munyika yezuva ranhasi, inokosha parameter ndiyo yekukurumidza kushandiswa kwehuwandu hwehuwandu hwemashoko, iyo inoramba ichichinjwa, yakawedzerwa. Kukwirira kwehutano hwemunhu kunowedzera kudiwa uye nyanzvi dzakadaro dzinodiwa pasi rose. Mhizha umo munhu ane kuongorora mafungiro angazviziva:
scientists wezvematongerwo enyika;
nyanzvi mumakombiyuta emakombiyuta kumatanho akasiyana-siyana;
IT - technologies
Analytical thinking - mabhuku
Kubudirira kwekuongorora mazano kunobatsira munhu kukurira mamiriro ezvinhu akaoma pasina manzwiro asina kufanira. Iko kukwanisa kuongorora kunobatsira kuona zvakabuda pane izvo zvaiita sekuti hazvipo uye kuvaka chinyorwa chinonzwisisika chechikonzero-hukama hukama. Kuverenga fungiro mumhando yemupeki, pamwe chete nemabhuku anokosha pamusoro pokusimudzirwa kwekufunga anobatsira pakuvandudza unyanzvi hwokuongorora:
"Engineering engineering." - D. Gavrilov
"Unyanzvi hwokufunga. Kufungidzira kwemufaro senzira yekugadzirisa matambudziko akaoma "- E. Bono
"Bhuku rezvisarudzo. 50 mienzaniso yekufunga kwekufunga "- M. Krogerus
"Pfungwa yekufunga mukugadzirisa zvinetso zvakaoma uye zvakaoma" - A.Teslinov
"Zvinyorwa mumibvunzo nemhinduro" - V.Vechkanov
"Logic uye tactical kufunga. 50 + 50 mabasa ekudzidzisa mazano evanhu vanobudirira "- C. Phillips
"Adventures yaSherlock Holmes" - A.K. Doyle
"Hercule Poirot" kutenderera kwemabhuku aA. Christie
Kuregerera sei munhu?
Snobbery - chii icho uye kuti kutsanangura sei snob?
Kutya kwerima - kuti kubvisa sei phobia?
Kufungidzira - chii ichocho, zvinokonzera, zviratidzo, maitiro, nzira yekurwa nayo nekukunda?
Zvinokuvadza kunwa doro here?
Kutya nzvimbo yakapoteredzwa
Nzira yekugadzirisa sei kuora mwoyo uye kusava nehanya?
Nzira yekuziva sei kuti munhu anoreva nhema?
Kuchinja mamiriro ekuziva
Turkey nekamuti sauce
Kugadzirwa kwekamuri duku rekugara
Winona Ryder anova chiso chitsva cheMarc Jacobs Beauty
Mafungiro epfungwa nezvevechiri kuyaruka
Nzira yekudzidzisa mwana kumuchu?
Nzira yekunyora bhuku - kupi?
Hove solyanka - recipe
Zvikamu zvekuenda kumwedzi
Aivar in Serbian - recipe
Apoplexy of the ovari - zviratidzo
Simba kubva kumapuranga ekare
Aquadetrim kwevana vachangoberekwa
Novodevichy Convent muSt. Petersburg
Alocasia - kutarisira kumba, mazano ekukura
Chikoro chekorodhi nemaoko ako
Mysteries pamusoro pekupedzisira kwevana
Ungasarudza sei kicheki?
Zviratidzo zvekupisa kupisa kuvanhu vakuru